रिलायन्स फाइनान्सले पायो ४५% हकप्रद बिक्री गर्ने अनुमति
ARCHIVE, MARKET WATCH » रिलायन्स फाइनान्सले पायो ४५% हकप्रद बिक्री गर्ने अनुमति
काठमाडौं - रिलायन्स फाइनान्सले ४५% हकप्रद बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सलाई १०ः४.५ अनुपातमा १०० रुपैयाँ दरको २३ लाख ६ हजार ५७१.६० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । यस हकप्रदमा सनराइज क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ ।
हाल रिलायन्सको चुक्ता पुँजी ५१ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७४ करोड ३२ लाख २८ हजार १६० रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा रिलायन्सले १० करोड ९८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ४४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ६१ पैसा छ ।
प्रकाशित : Thursday, October 12, 2017
यी हुन् प्रचण्डलाई नि:शुल्क डेरा दिने घरभेटी, बदलामा घरभेटी अधिकारीलाई सांसद बनाउने सहमति !
म लगानीकर्ता र इमान्दार कार्यकर्ता ! काँग्रेस हार्दा दुखी भएको म आरजु हार्दा यसकारण खुसी छु !
सिलवाललाई एआइजी चन्दले टेलिफोन गरेर के भने ?
फलोअप : अनिल शाहको तलव काण्डले राष्ट्र बैंकमै हल्लीचल्ली, व्यक्ति विशेषका लागि नीति नै फेरिएला त ?